Ngaleso sikhathi samanje emigwaqweni ezweni lethu ugibele nenamba enkulu izimoto. Njengoba isimo ezahlukene ingabuye yenteke ngesikhatsi ushayela, njalo umshayeli azi ukuthi he ngaso sonke isikhathi kufanele ikhishwe umshwalense ngokuhambisana nomthetho wamanje. abashayeli abaningi kakhulu ebhekene lapho, kungakhathaliseki ukuthi ibangelwa yini abanayo isikhathi ukuvuselela umshwalense ku imoto yakho. Ngakho-ke, unombuzo: "Ngingakwazi gibela oluvelele umshwalense MTPL?". Ngaphansi komthetho wamanje, ukuhamba ngemoto egalaji akuvunyelwe nakancane ngaphandle umshwalense. Kodwa kuthiwani uma namanje ukushiya imoto nge CTP engavumelekile? Yiziphi izinhlobo penalty eziphoqelelwe leyo amaphoyisa omgwaqo, kanye noma yiziphi izinhlawulo, futhi yini osayizi asetshenziswa. Ngalolu futhi eziningi nezinye izinto uzofunda ku.
Kungani kukhona ukubambezeleka ngenxa umshwalense?
CTP sekwephuzile - akubona ubugebengu hhayi umusho, kodwa nje kokuthi kwakuyoba umphumela lapho kunezizathu ezithile. Izibalo zibonisa ukuthi minyaka yonke emigwaqweni isiba abashayeli abaningi abahamba ngemoto yakhe nge aphelelwe yisikhathi umshwalense imoto isithiyo.
Izizathu zalokhu yilezi:
yokuntuleka isikhathi sokuvakashela inkampani yomshuwalense;
lokukhohlwa noma ukunganaki abashayeli;
ukuhoxiswa yokuzithandela evela kumhlinzeki umshwalense.
Lawa izizathu ezijwayeleke kakhulu kungani abashayeli abaningi ukushayela nge umshwalense yisikhathi. Nokho, muva nje, imbangela yenkinga yinto ehlukile, ezingahlobene izici ezibalulwe ngenhla. Into wukuthi osukwini isikhathi sethu ukudlulisa Ukusabalala kwakumane akunakwenzeka ngenxa emigqeni omkhulu. Ngakho, abashayeli abaningi ngemva kwamahora amaningana elinde nje niguquke futhi uhambe.
Lubhekele CTP sekwephuzile kakhulu iba izinkampani zomshuwalense ngokwabo. Into wukuthi kule minyaka embalwa edlule izindleko inqubomgomo ikhuphuke kakhulu ngenxa ukufakwa kulo, ngaphezu umshwalense wemoto ngokwayo, ezihlukahlukene namasevisi eyengeziwe ezifana umshwalense wempilo, impahla kanye nabanye. Lokhu kwaholela ekutheni iqiniso lokuthi CTP isibe kanzima kakhulu ukushaya ezibizayo abanikazi imoto.
Ukuze ukuheha amakhasimende amasha kanye ukwandisa izimali zabo, izinkampani zomshuwalense abaningi baqala ukunikela abashayeli ithuba ukuklama umshwalense ngaphandle kwamasevisi ezingadingekile. Labo abafisa ukusizakala ngaleli thuba ukuba impela eningi, okwaholela ekutheni ekwakhekeni emigqeni omkhulu.
CTP sekwephuzile: definition
Njalo umshayeli kufanele wazi ukuthi umthetho ayikho into enjalo. Nokho, Yiqiniso, le nkulumo isetshenziswa njengoba ukusungulwa yokuthi non-sokuvuselela umshwalense, akukho azowalekelela zomthetho anakho hhayi. Ngaphambi 2009, ngokuvumelana neziqondiso, umshayeli ngamunye wayenalo ilungelo ukulawula imoto noma ngabe elithi inqubomgomo sesidlulile, kodwa manje leli thuba banayo.
Njengoba izinto ume namuhla?
Izinyanga ezinikezwe ngumthetho, wanikezwa abashayeli ukucabanga ngesidingo umshwalense esiyisibopho imoto yakho bese ukunweba sekwephuzile umshwalense CTP. Phakathi nalesi sikhathi, le nqubomgomo kubhekwa abangalaleli, kodwa akazange alahlekelwe amandla ayo futhi amaphoyisa omgwaqo yayingenalo ilungelo lokuthola kahle umshayeli.
Kulezi zinsuku, izinto sezihluke kakhulu. Amaphoyisa Unelungelo linqume isigwebo ngosuku olulandelayo ngemva inqubomgomo uyekile nethonya. Lokhu kungenxa yokuthi zikahulumeni babuyekeze umthetho futhi nganquma ukuthi zonke umshayeli ukhathazeke ukwelulwa umshwalense kusengaphambili, ngisho nangaphambi isikhathi saso.
Lokho ngokushayela nge umshwalense sekwephuzile?
umshayeli ngamunye abanesifiso sokwazi: "CTP udlulile okusongelayo ngoba?" Impendulo yalo ingatholakala ingxenye yokuqala ka-Article 12.37 kweKhodi Administrative, okuyinto ngo 2014 satjhugululwa kusukela mhla lu-15 Novemba 2015. Ngokusho lesi simiso, ngokushayela uma kwenzeka yokuntuleka umshwalense, noma uma inqubomgomo ayisavumelekile, uma isigwebo yemali in inani ruble 800. Ngemva ekukhokhweni emihle ngokushesha njengoba umshayeli ungaqhubeka ukushayela.
Inani mncane impela, ngakho abashayeli abaningi bakhetha isikhathi esithe xaxa alikhokhe kuka ukuchitha tibalo fabulous ngokuba avtograzhdanki isandiso. Ikakhulukazi esinayo wuliswa yemali kuphela icala uma uvinjwa amaphoyisa omgwaqo.
kungaba kangaki amjezise yezimali umshwalense sekwephuzile?
Ngakho, wena vele ukuthi inhlawulo sekwephuzile umshwalense CTP. Nokho, lapha kukhona omunye kombuzo: "Zingaki izikhathi ngosuku, umshayeli kungenziwa bahlawuliswa ngokwephula yokuntuleka noma umshwalense kokulibala?"
Ngokomthetho isiRashiya, amaphoyisa womgwaqo abavunyelwe ukuba linqume izinhlawulo omunye umshayeli izikhathi ezimbalwa ngoba ukoniwa efanayo. Nokho, esimweni umshwalense sekwephuzile, izinto zihlukile kancane. isigwebo ngokwezimali uma umshayeli imisiwe CTP ngoSuku 1, esikhulu ukutholakala, ngakho uma ngelinye ilanga uzoyeka kathathu ke kufanele ukhokhe okuhle esilinganayo. Lokhu kungenxa yokuthi isigwebo ikhishwa hhayi kakhulu ukubambezeleka kwenqubomgomo, futhi ukuphathwa izimoto uninsured, okuyinto kungukuphula ehlukile futhi kudinga ehlukile isigwebo yemali esimweni ngasinye.
yemali unswinyo Usayizi inqubomgomo sekwephuzile for nezinhlangano ezingokomthetho
Nge unswinyo yezimali abantu ngobukhulu, yonke into icacile, futhi yini inhlawulo sekwephuzile MTPL umshwalense for nezinhlangano ezingokomthetho? Kukhona ngisho simple, ngoba le ndawo yomthetho ikude ephelele. Inkinga iwukuthi inhlangano unelungelo ukuthenga umshwalense for imoto ngayinye okungukuthi kwisichasiso yenkampani. Nokho, kanye nabo bonke abakhuleka kuziwa yomshuwalense imoto, uyaqonda hhayi umqashi baqatsha umsebenzi usebenza umshini. Nguye okhokhela nenhlawulo eyakhishwa umshwalense yisikhathi.
Kanjani ukuba ngibe kulesi simo?
Uma umshayeli lenkampani, udinga esifike ukukhumbuza ukuhola kwakhe isidingo ukunweba avtograzhdanki. Kungcono ngiqale okungenani izinyanga ezintathu ngaphambi kosuku lokuphela kwesikhathi inqubomgomo. Uma isandiso iphelelwe yisikhathi CTP akukakasetshenziswa e ngendlela esifike ngesikhathi, futhi wena zahlawuliswa, ke kufanele ulindele ukuphelela nokubuyisela kumqashi. Uma umqondisi enqaba imali, ngakho-ke indlela kuphela kulesi simo kungaba isikhalazo enkantolo.
Ngaphambi kokuba uphendule lombuzo umbuzo ukuthi kungenzeka ukunweba sekwephuzile ithuluzi umshwalense icala, kubalulekile ukuba ukhulume isenzo isikhathi autocitizen.
Namuhla, kukhona izigaba ezintathu izimoto ukuthi angaphansi umshwalense:
izimoto Foreign, ukuhlala endaweni WaseRussia okwesikhashana. Lesi sigaba kuncike umshwalense ayimpoqo, futhi umshayeli inikezwa yesikhashana Inqubomgomo ubuqiniso esiyizinsuku 5 kuya ku-15. Ngakho CTP ukubaluleka kungakhathaliseki inkathi uyefana.
izimoto Foreign baqhutshwa kuleli zwe. Kulokhu, it kuba isibopho ukuthenga CTP izinsuku ezingu-20.
Noma yimuphi imoto ukuthi Siyonikwa kurekhodi unomphela omgwaqo. Ngaphansi leli qembu kuhlanganisa ngokuphelele zonke izimoto ebhaliswe Russian Federation. Kubo uthenge umshwalense esivumelekile kusuka ezinyangeni ezintathu kuya onyakeni owodwa.
Lapho senza umshwalense kufanele acabangele neqiniso lokuthi akuyona yonke abashayeli basebenzisa imoto yabo ngaso sonke isikhathi. Ezinye aziphume ziphele kuleli zwe nge injongo yokuzilibazisa noma emsebenzini, kanti abanye ukuhamba ehlobo noma ebusika. Kukhona futhi labo uhlela ukuthengisa izimoto zayo esikhathini esizayo. Uma uneminye sekwephuzile umshwalense isibopho sezomthetho ithuluzi inqubomgomo, yini okufanele uyenze esimweni esinjalo, kuzoxoxwa ngakho kamuva. Kufanele kube impoqo acabangele isikhathi udinga inqubomgomo entsha, hhayi overpay izinyanga ukuthi imoto kuyoba lutho.
CTP isandiso: lokho Kuzothatha?
umshayeli ngamunye abanesifiso umbuzo wokuthi ukunweba CTP kungaba. Uma inqubomgomo imisiwe, kufanele kube lula ukudlulisa. Ukuze wenze lokhu, kumele uthole inkampani ilungelo umshwalense esinikela ezimvunayo kakhulu futhi amanani aphansi.
Ngaphezu kwalokho, isidingo sokulungiselela iphakethe kwemibhalo, okubandakanya:
iphasiphothi Russian ngoba ngamunye;
isitifiketi sokubhaliswa kwe-esemthethweni for nezinhlangano ezingokomthetho;
ukubhala ku yokubhaliswa imoto amaphoyisa omgwaqo;
adlule ezidlulayo wokuhlola.
Lokhu iqoqo imibhalo iyadingeka sokubhalisa noma sokuvuselela zomshuwalense, ngakho-ke kufanele uzilungiselele kusenesikhathi ukuze kusheshiswe uhlelo lonke.
Okufanele ukwenze uma kwenzeka ingozi, uma CTP siphelelwe yisikhathi?
Uma wahileleka engozini yemoto, kodwa ubhekene ebambe CTP sekwephuzile, indlela engcono kakhulu kulesi simo kungaba nekhambi izinkinga nezinye party ngaphandle ukubandakanywa efanele abomthetho. Ngempela, ngaphezu ukukhokhela ukulungiswa ephathini abalimele, kuyodingeka ucabange nangezilaleli uhlawule.
Uma obhekene engozini kuyinto omunye umshayeli, uthola isinxephezelo umonakalo uzokwazi ukuba esakhiweni noma ezinkantolo. Uma le ngozi yenzeke iphutha lakho, ukulungisa imoto, ukuliliswa zokuziphatha nokunxeshezelwa ngenxa nezinye izindleko ezihlobene ezithwalwa ngokugcwele emahlombe akho. Kulokhu, it is hhayi Kunconywa ukuba senqabe ethile ekukhokheni isinxephezelo, njengoba lowo ophathwe kabuhlungu noma inkampani yakhe umshwalense ungafaka icala enkantolo.
Ingabe akhona amathuba okuba ukugwema isijeziso umshwalense sekwephuzile?
Mhlawumbe njalo umshayeli abanesifiso umbuzo wokuthi kungenzeka ukugwema umthwalo ukuphathwa imoto ngaphandle umshwalense kuphoqelelwe khona noma esimweni isikhathi saso isikhathi. Njengabangaqondakali kungase kuzwakale, kodwa kukhona okunye ukukhetha ukuzikhulula ukukhokha inhlawulo. Nokho, ukuze lokhu kudingeka alungiselele umhlangano amaphoyisa womgwaqo. Ngaphezu kwalokho, ukulawula imoto kufanele omunye umshayeli.
Uma usuphelelwe yisikhathi CTP, futhi awazi ukulinda isikhathi eside kakhulu, noma ngenxa yanoma yisiphi isizathu ungafuni vuselela it, isijeziso kungagwenywa uma amandla bhala ommeli ukulawula umshini ngakolunye umuntu. Uma uzoba Ngokuphazima kweso uyeka patrol beshayela ke azihambisani nesijeziso yemali ingalandelwa.
Nokho, kubalulekile ukuqonda ukuthi lokhu kuzosebenza kuphela uma ngabe ushayela. Into wukuthi umtsetfo lokhona ivumela zenziwe yinoma imuphi umshayeli ukuze usebenze imoto, ku ezilotshiwe igama amandla ommeli. Kulokhu, ngokomthetho kubhekwa njengoba umnikazi omusha, ubani zomthetho izinsuku ezingu-10, futhi phakathi naleso ungakwazi ukushayela imoto ngaphandle umshwalense.
Kuthiwani imoto umshwalense phesheya?
Uma uqhathanisa ubukhulu isigwebo yemali, okuyinto zikhokhelwe abashayeli Russian ngokushayela ngaphandle kwezincwadi umshwalense, ne okufanayo emazweni angaphandle ke ruble 800 abonakale ngisho nesenti suschimi. inhlawulo lokhu ukucasula amazwe aseYurophu ongafinyelela euro 700, futhi kwezinye izimo, umshayeli kungaba futhi ingabe ngiziphuce izincwadi zokushayela. Kodwa kungani iya kude, uma engumakhelwane Ukraine, lapho izinga lokuphila akuyona liphezulu kakhulu, inani esihle kungaba isukela 425 kuya 850 hryvnia (kusuka ayizinkulungwane omunye: yinkulungwane namakhulu amabili ruble), njengoba ingaphezulu kuka eRussia.
Ngakho-ke, ngempela kunengqondo ukuphetha ngokuthi esikhathini esizayo eyinhlawulo Russian ukulawula imoto nge umshwalense aphelelwe yisikhathi kube kungase kunyuke kuze usayizi umxhwele kakhulu.
Amasu ajwayelekile namasu
Ukuze ugweme izinkinga ezihlukahlukene, kutuswa pay ngesikhathi esifanele zonke izinhlawulo ekhishwe ngokwephulwa kwanoma iyiphi imithetho yomgwaqo. Into wukuthi bayabulawa ukubambezeleka likhokhelwa, futhi umphumela waba ukuthi ruble 800, hhayi kuphela kungandisa ngesigamu, kodwa umshayeli angase wavalelwa ejele izinsuku ezingu-15. Kungcono ukukhokha inhlawulo zingakapheli izinsuku 20 emva umbiko zokuphatha. Kulokhu, ungathola isaphulelo ngamaphesenti angu-50.
Ngaphezu kwalokho, kutuswa ukuba kugcine bona lapho kunempikiswano noma ngiyibhimbi abasebenzi omgwaqo. Udinga ukukhuluma neziphathimandla kakhulu ngomoya ophansi futhi ngenhlonipho, futhi kufanele sizame ukuchaza sonke isimo, bese ubacela ukuthi ungene isikhundla sakho. Kulokhu, kukhona amathuba omkhulu ukuthi okuzokhishwa inhlawulo, kodwa kuphela wenza isixwayiso ngamazwi.
Endowment yomshwalense - nokuthula kwengqondo esikhathini samanje futhi nethemba ngekusasa.
Impendulo evela abasebenzi "Rosgosstrakh". Russian State Insurance Company
Ukuthi udokotela ukutshela impilo yomuntu nje ngokubheka kuye?